ओलीको ३८ पृष्ठ लामो प्रस्तावमा प्रचण्डलाई यति धेरै प्रश्न, कि तँ छैन कि म छैन ? अब के हुन्छ नेकपामा ? हेर्नुहोस मंसिर १४ गतेका मुख्य समाचारहरु – Complete Nepali News Portal
ओलीको ३८ पृष्ठ लामो प्रस्तावमा प्रचण्डलाई यति धेरै प्रश्न, कि तँ छैन कि म छैन ? अब के हुन्छ नेकपामा ? हेर्नुहोस मंसिर १४ गतेका मुख्य समाचारहरु
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी सचिवालयमा ३८ पृष्ठ लामो प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
प्रचण्डको प्रस्तावमा आफूमाथि लागेको आरोपको विना कुनै आग्रह र आक्रोश आफ्ना विषयहरु राख्ने भन्दै उनले प्रचण्डमाथि प्रतिप्रश्न गरेका छन् । हेर्नुहोस मंसिर १४ गतेका मुख्य समाचारहरु :